Timo Werner Oo Magacaabay Qofkii Ka Caawiyey In Chelsea Iyo Liverpool Uu Kala Doorto | Laacibnet.net
Timo Werner Oo Magacaabay Qofkii Ka Caawiyey In Chelsea Iyo Liverpool Uu Kala Doorto
Weeraryahanka Timo Werner ayaa shaaciyey qofkii ka caawiyey inuu kala doorto Chelsea iyo Liverpool oo muddo dheer lala xidhiidhinayay.
Blues ayaa dhamaystirtay heshiiska Werner oo ay £47.5 milyan kagala soo wareegtay RB Leipzig, waxaanu usbuucii mushahar u qaadanyaa £150,000 Gini.
34 gool oo dhamaan tartamada ah oo uu soo dhaliyey, waxa uu usoo dhaqaaqi doonaa magaalada London marka lasoo gabogabeeyo tartanka Champions League oo ay kooxdiisu wareegga siddeed-dhamaadka ugu gudubtay laba guulood oo ay Tottenham kaga gaadheen wareeggii 16ka.
24 jirkan oo si weyn loola xidhiidhiyey Liverpool waxa waqti dambe ka hor qaadday Chelsea oo uu isagu doortay, waxaana sida uu qiray ka caawiyey go’aanka tababare Frank Lampard oo ay wada-hadal toos ah yeesheen.
Waxa kale oo qayb ka ahaa wada-hadalkaas, maamulka sare ee Blues oo iyaguna u caddeeyey qorshaha ay ka damacsan yihiin, halka uu Lampard u sheegay inuu ka dhigi doono laacib muhiim ka ah Stamford Bridge.
“Wada hadalka aan la yeeshay maamulka Chelsea wuxuu ahaa mid wanaagsan oo aan ku doortay iyaga. Frank Lampard ayaa isoo kale i bardhi-taaray oo si dhab ah u doonayay inuu ogaado in aan doonayo Chelsea, waxaanan dareemi karay nefis ah inaan uga shaqayn karayo (Chelsea) sidii Leipzing.” Ayuu yidhi Timo Werner oo la hadlay telefishanka Sky Sports.
Timo Werner waxa uu faahfaahiyey wixii ay ku wada hadleen Frank Lampard, waxaanu yidhi: “Sheekaysiga uu ila yeeshay aniga, tababaruhu wuxuu carrabka ku adkeeyey sida uu ii doonayo, sida badan ee uu ii qiimaynayo shaqsi ahaan.”
waalida united says:
bardhi-taaray maxaa la dhahaa sxb